Fil d'actualités du 16/11/2018
16/11/2018 - 09:00 : MPITANDRO FILAMINANA: Hisy fanambarana lehibe hatao ao amin'ny Toby Ratsimandrava anio maraina.
15/11/2018 - 14:00 : CENI: Hiroso amin'ny fampitahana na "confrontation" an'ireo PV an-tsoratra, ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana anio manomboka amin'ny 3ora tolakandro ka miantso, ireo kandida, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao gazety hanatrika izany.
15/11/2018 - 11:30 : LALAO RAVALOMANANA: Tonga nijery ireo fanotofana tany tsy aradalana teny Andranomahery ny ben'ny tanana Lalao Ravalomanana androany.
15/11/2018 - 11:00 : FAMPIANARANA AMBONY: Nisokatra androany maraina ary haharitra 2 andro ny fampiratiana momba ny sekoly sy fampianarana ambony tsy miankina na ny "Salon des études supérieurs" karakarain'ny Madajeune, ahitana mpandray anjara manodidina ny 70.
15/11/2018 - 10:45 : CENI 15 NOVAMBRA 2018 10H23 BV 20061 / 24852 (80.72%) MPIFIDY VOASORATRA ANARANA: 8005632 / 9913599 VATO MANAN-KERY: 4003476 TAHAM-PANDRAISANA ANJARA: 54.03% - RAJOELINA Andry Nirina : 1588543 soit 39.68% - RAVALOMANANA Marc: 1424466 soit 35.58% - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 324465 soit 8.10% - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 52063 soit 1.30%
15/11/2018 - 09:30 : BAOLINA KITRA: Manomboka anio amin'ny 10 ora maraina ny fivarotana ny tapakila Tribune Latérale ho an'ny lalao ihaonan'ny Barea de Madagascar amin'ny Sokoor Al Jedian du Soudan ny Alahady 18 Novambra 2018. Izany tapakila izany dia afaka jifaina eny Isoraka amin'ny vidiny 50.000 ariary.
14/11/2018 - 11:30 : PESTA: Mahatratra 12 hatramin'izay no namoy ny ainy noho ny aretina PESTA teto amintsika ho an'ity taona ity.
14/11/2018 - 10:30 : ANTSIRABE: Vato tsy ara-dalana nilanja 667 kg no saron’ny Zandary teo anivon’ny BPR Vakinankaratra ny alatsinainy 12 novambra, tao amin’ny sakana mahazatra tao Anjazafotsy-Betafo.
Archive du 20180216
Aretin’ny loto Miparitaka ny gripa mahery “Type A H1N1”
Tao anatin’ny volana febroary dia nirongatra ny aretin’ny loto, ka taorian’ny “fièvre typhoide”, dia tonga indray ny gripa mahery izay nahatonga ny talem-paritry ny fahasalamana any Toamasina nampanao fitiliana mihitsy teo anivon’ny “Institut Pasteur” Antananarivo.
Raha krizy amin’izao Ho avy ny tafiky ny firenena mikambana
Nanomboka ny 11 febroary hatramin’ny rahampitso ny fivahinianan’ireo iraky ny vondrona Afrikanina eto Madagasikara.
Ny Rado Rafalimanana Nisoloky ny sarin-dRavalomanana
Asa na efa tafalatsaka loatra any amin’ny atifanahy ny halatahaka sy ny fizahozahoana fa dia nahagaga ny rehetra ny fahasahian’i Ny Rado Rafalimanana nanaparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera facebook ny sarin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy tany Ambila Lemaitso ary notaingenany ny serasera metimety aminy manokana izany avy eo.
Hery Rajaonarimampianina Hipoerapoera any Mananara avaratra indray
Hihazo an’i Mananara Avaratra ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina anio, raha ny vaovao re omaly. Re ihany koa fa handeha fiaramanidina manokana ny tenany amin’izany, ary handalo any Sainte Marie amin’ny alalan’ny angidim-by avy eo.
Minisitry ny fitsarana Tsy mba mahay manaja tena mihitsy ve ?
Nitana ny teny nomeny i Houcine Arfa fa hitory olona ambony sy manampahefana Malagasy maromaro ary tafapetraka any amin’ny “Tribunal de Grande Instance de Paris” ny 7 febroary lasa teo.
Fampitam-baovaon’ny fitondrana Tsy mahavita ny asany ny minisiteran’ny serasera
Tontosa soa aman-tsara iny ny fihaonana manokana natao hifankahazoan’ireo mpikamban’ny governemanta am-po mba hahamora ny fifandraisana sy ny serasera hanatsarana ny fomba fiasa na ilay antsoina hoe « Team building » izay natao tany Mantasoa.
Tale jeneralin’ny Jirama Niaiky fa tena niakatra ny vidin-jiro
Niaiky omaly ny tale jeneralin’ny Jirama Olivier Jaomiary Aimé raha nivahiny tao amin’ny TV Plus Madagascar fa tena nisy fiakarany tokoa ny vidin-jiro.
Enim-bolan’ny CNaPS Fanampiana ireo tara fandoavana latsakemboka
Ho fanampiana ny fiangonana sy ireo orinasa rehetra amin’ny sehatra tsy miankina na ireo vondrom-bahoakam-paritra mampiasa ECD dia nanao hetsika manokana ny CNaPS antsoina hoe « enim-bolan’ny CNaPS », tolotra nanomboka ny 1 janoary lasa teo ary tsy hifarana raha tsy ny 30 jona 2018 izao.
Antoko mpihira AMAM Hiavaka ny faha-50 taona
Hosokafana amin’ny fomba ofisialy amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana goavana hotontosaina ny marainan’ny alahady izao ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-50 taonan’ny antoko mpihira Antsan’ny mamatonalina etsy Andrainarivo na ny AMAM.
Lalao Olimpika - Korea Atsimo Tafita hiatrika ny “Slalom dame Run 1” i Mialitiana anio zoma
Laharana faha-48 tamin’ny mpifaninana niisa 58 nahavita ny fidinana roa hatramin'ny farany i Mia na Mialitiana Clerc (dossard 66), ilay teratany Malagasy vao 16 taona monja, teo amin’ny fifaninanana ski « salalom Géant » notontosaina tany Pyeong Chang tany Korea Atsimo omaly alakamisy 15 febroary 2018.
Basket Coupe du Président zone sud Anio zoma 16 febroary ny 1/4-dalana
Taorian’ireo lalao fifanintsanam-bondrona farany notontosaina ny alarobia 14 febroary teo tao amin’ny kianja annexe Ihorombe ka nahazoana ny vokatra :
Baolina kitra ligy 1 Analamanga 2018 Vonona ny ekipan’ny Uscafoot sy ny mpanazatra vaovaony
Hanomboka amin’ny alahady 22 febroary izao etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina sy any amin’ny kianjan’i Carion ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny baolina kitra 2018 eto Analamanga ho an’ny sokajy « ligue 1 ».
Miha sarotra ny fiainana maneran-tany. Samy sahirana sy miha sahirana daholo ny olona rehetra.
Mpitatitra RN 1- RN 4- RN -6 Afaka telo herinandro vao hifindra eny Andohatapenaka
Nanaiky ny fangatahan’ireo koperativa mivondrona ao anatin’ny ASTRAM ihany ny minisiteran’ny fitaterana sy ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety fa tsy tokony mbola hifindra eny Andohatapenaka iretsy voalohany raha tsy tomombana tsara ny zava-drehetra ilainy.
Aretina sarotra sitranina Ho avy ny fanamaivanana ny saram-pitsaboana
Saika tsy mahatody fitsaboana hatramin’ny farany avokoa ireo olona marary eto amintsika noho ny halafosan’ny vidim-panafody sy ny hasarotan’ny fiainana.
Tranoben’ny varotra sy indostria Frantsa Madagasikara Mila miofana ny orinasa Malagasy
Nampahafantarina omaly alakamisy 15 febroary tetsy amin’ny trano foiben’ny CCIFM Ankorondrano ny andiany fahatelo amin’ny fampiofanana ny orinasa eto Madagasikara.
Fonenan’ny ben’ny tanàna teny Anjohy Navadika ho tranombakoka momba ny sary
Tontosa omaly alakamisy 15 febroary 2018 ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny « Musée de la photo Madagascar » na ny tranombakoka momba sary eny Anjohy Andohalo, notanterahin’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, notronin’ny Masoivoho Frantsay Veronique Vouland, ny Talen’ny IMV Tamara Teissedre-Philip, ny avy amin’ny Région Iles de France, ny oniversiten’Antananarivo sy ny avy amin’ny tanànan’Antananarivo.
Tsy fandriampahalemana ao Antsalova Mpanolotsain’ny praiminisitra no ahiana ho ao ambadika
Mitohy hatrany ny fitakian’ny vahoakan’Antsalova, faritr’i Melaky, ny famerenana ny adjida Patrice izay nikaomandy ny zandary niady tamin’ny tsy fandriampahalemana any an-toerana ary nafindra toerana tamin’ny volana oktobra, raha ny fanazavan’ny solombavambahoaka avy any an-toerana. 3 volana monja,
Afrika Atsimo Filoha vaovao i Cyril Ramaphosa
Taorian’ny fametraham-pialan’i Jacob Zuma ny alarobia alina teo dia i Cyril Ramaphosa no misolo ny toerany izay mpitarika ny anto ANC amin’izao.